दशैंमा खसी, वियर र पैसा मागेर दुःख दिने प्रहरी इन्स्पेक्टरमाथि कारवाही सुरु, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
दशैंमा खसी, वियर र पैसा मागेर दुःख दिने प्रहरी इन्स्पेक्टरमाथि कारवाही सुरु, को हुन् उनि ?
काठमाडौ। चाँडबाडको नाममा खसी र घुस रकम मागेको आरोपमा एक प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर माथि कानुनी कारवाहीका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको छ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कलंकीका इन्चार्जका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका इन्स्पेक्टर शंकर खड्काले आचरणबिपरीत क्रियाकलाप गरेको गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेपछि कारवाहीका लागि प्रमाण जुटाउन प्रहरी लागी परेको हो।
स्रोतका अनुसार आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई छानविन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। कलंकी यातायात ब्यवसायी संघ र त्यस क्षेत्रका पेट्रोल पम्पका संचालकसँग पैसा र खसी मागेको आरोप इन्स्पेक्टर खड्कामाथि लागेको छ।
‘महाशाखाकै हाकिम र प्रहरी प्रधान कार्यालयका हाकिमहरुलाई पनि बुझाउनुपर्छ’ भन्दै उनले खुल्लेआम खसी र पैसा मागेको आरोप छ।यसबारे सूचना आइजीपी क्षेत्रीसमक्ष पुगेपछि केन्द्रबिन्दु बनाएर अनुसन्धानमा तानिएका हुन्।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले इन्स्पेक्टर शंकर खड्कामाथि आचरणबिपरीत क्रियाकलाप गरेको आरोपमा छानविन भइरहेको बताए। कलंकीदेखि नागढुंगासम्मका बालुवा डिपोहरुसँग पनि महिनावारी रकम असुल्दै आएको आरोप समेत छ।
कलंकीसँगै नैकाप र आसपासका क्षेत्रमा मापसे चेकिङका नाममा घुँस असुलेर दुःख दिने गरेको भन्दै गुनासो आएपछि उनीमाथि अर्को छानविन भइरहेको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार छानबिनका क्रममा कलंकी यातायात ब्यवसायी संघबाट खड्काले खसी र घुस लगेको पुष्टि भएको छ। उनलाई निलम्बन गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरी स्रोतको भनाई छ।
यो पनि, बागमती र प्रदेश १ मा यसै साता मुख्यमन्त्री फेरिँदै: दुईवटा प्रदेशमा यसै साता मुख्यमन्त्री फेरिने भएका छन्। बागमती र प्रदेश १ मा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री फेरिने भएका हुन्। नेकपा एमाले विभाजनपछि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका छन्।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिसकेकी छन् । कार्तिक ४ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
यस्तै, प्रदेश १ प्रदेशसभाको बैठक कार्तिक ५ गते शुक्रबारका लागि आह्वान गरिएको छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
सत्तारुढ दल विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन बाध्य भएका हुन्।
बागमती प्रदेशमा यस्तो छ समीकरण: बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अल्पमतमा परेको छ। १०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४३ सांसदमात्र छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
तर, २३ सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, २२ सांसद रहेको नेपाली काँग्रेस र १३ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका पार्टीले प्रदेशमा पनि केन्द्रकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएका छन्। जसले गर्दा प्रदेशसभामा यी तीन दलका ५८ सांसद हुन्छन्। यो संख्या प्रदेशसभाको पूर्ण बहुमत हो।
बागमती प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २, राप्रपाका २ र जसपा नेपालका एक सांसद छन्। जसपा पनि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसहितको गठबन्धनमा सामेल छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखिँदैन।
प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा: प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखिँदैन। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ। तर सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसँग ४१ सांसदमात्र छन् ।
अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० र जसपा ३ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग ४९ सांसद भएका कारण प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न असम्भव देखिएको हो। प्रदेशसभामा राप्रपाका एक, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक सांसद छन्।